Thursday, February 21, 2019 04:54
(This product hasaminimum quantity of 120)
၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ရန်ကုန်မြို့ပြစီမံကိန်း စတင်ချိန်မှစ၍ ယနေ့အထိ ခေတ်အဆက်ဆက်ပြောင်းလဲလာခဲ့သော ရန်ကုန်မြို့ရှိ ထင်ရှားသောအဆောက်အအုံများ၊ အထင်ကရနေရာများ အကြောင်းကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော စာအုပ်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်များအနေဖြင့် မြန်မာပြည်သို့ရောက်ရှိလာချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ အလည်မဖြစ်သွားရောက်လည်ပတ်သင့်သော နေရာများကို သမိုင်းကြောင်းများနှင့် တင်ပြထားပါသည်။ မြို့တော်ခန်းမ၊ လွတ်လပ်ရေးကျောက်တိုင်၊ ရန်ကုန်မြို့လယ်ရုပ်ရှင်ရုံများ၊ ပန်းခြံများ၊ စစ်ကြိုခေတ် စစ်ပြီးခေတ် အဆောက်အဦးများ၊ လမ်းများအကြောင်းကို သမိုင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများနှင့်တကွ ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ် တင်ဆက်ထားသော စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်....
A hestoric event took place on Sparks Street in front of the Secretariat on 20th December 1938. A large number of University students and High School students headed by the Rangoon University Students' Union (R.U.S.U.) demonstrated the British Colonial Government in protest against the unijustly capture of two student leaders Ko Ba Hein and Ko Ba Swe at Magwe in central Myanmar by closing all the gates of the Secretariat thereby making the bureaucratic administrative machinery to be ceased temporarily. Jusdon College student leader Aung Kyaw succumbed to his injuries when he received the baten charges of the policemen. Hence, Sparks Street has become Bo Aung Kyaw Street in honour of the late student leader Aung Kyaw.